​‘मोटी’ जरीन खानले कसरी घटाइन् ५० केजी तौल ? यस्तो छ पीडादायी भोगाईपछिको खुसी
Friday,6Jul, 2018 3:51 PM
बलिउड अभिनेत्री जरीन खानले फिल्मी करिअरको सुरुवातमा निकै आलोचनाको सामना गर्नुपर्यो । आलोचनाको कारण थियो उनको मोटोपन । पहिलो फिल्म ‘वीर’ मा उनले गरेको अभिनयभन्दा बढी चर्चा उनको तौलको भयो । तर, अहिले उनलाई ‘मोटी’ भनेर नाक खुम्च्याउन कसैले सक्दैन । अहिले ‘फिट एण्ड फाइन’ छिन् । अहिले त जरीनको सौन्दर्य र सुडुलो शरीरको चर्चा चल्छ बलिउडमा । नहोस् पनि किन, सुरु र अहिलेमा उनको तौल आधा अन्तर छ । फिल्ममा आउनुअघि एक सय केजीकी उनी अहिले ५० केजीकी भएकी छिन् । तर, यो सम्भाव भयो कसरी ? प्रश्नको जवाफ जरीनले दिएकी छिन् :
–मेरो लागि १०० किलो वजन घटाएर ५० किलोसम्मको यात्रा तय गर्न निकै कठिन थियो । तर मैले यसबाट भुल्नै नसक्ने पाठ सिकेँ । सुरुमा मलाई धेरै अप्ठ्यारो भएको थियो किनकी म कतै जाँदा छोटो दूरी नै भए पनि हिँडेर जाँदिनथेँ । म जंक फुड खाएरै बाँचिरहेकी थिएँ । म साधारण पानीको सट्टा जुसहरु पात्रै पिउथेँ । तर, पछि यी सबै कुराको बानी परिवर्तन गरेर अनुशासित जीवन जिउन सुरु गरेँ ।
–मैले एक्सरसाइज गर्न सुरु गरेँ । फरक महसुस हुन थाल्यो । यो सब कुरा गर्दा आफूमा आएको परिवर्तनले उत्साह बढ्ने गर्दथ्यो । मलाई हरेक किसिमका लुगाहरु फिट हुन थाले । आफू फिट भएको देख्दा मलाई राम्रो लाग्न थाल्यो । त्यसपछि मैले फिटनेसलाई आफ्नो जीवनशैली बनाएँ । तर, मलाई कसैले मोटी भन्यो भनेर वा कसैको दबाबमा आएर यस्तो गरेकी थिइनँ । म आफैँले फिट रहनुका फाइदाहरु बुझेँ, साथै मोटोपन र अत्याधिक वजनले निम्त्याउने रोगहरुबारे बुझेँ । त्यसैले मैले यो सब गरेकी हूँ ।
–वर्षौंदेखि प्लस साइजका व्यक्तिहरुलाई तल्लो स्तरको व्यवहार गरिन्छ । म स्कुल र कलेजका दिनहरुमा प्लस साइजकी हुँदा कहिले पनि राम्रो र स्टाइलिस लुगाहरु लगाउन पाइनँ । जस्तो भेटिन्थ्यो त्यस्तै लुगा लगाउनु बाहेक कुनै विकल्प थिएन । मसँग यस्तो व्यक्तिको अस्तित्व नै छैन जस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो । यही कारण मलाई आफ्ना लागि लुगाहरु नै नबनाइएको जस्तो लाग्थ्यो ।
–बलिउडमा करिअर सुरु गर्दा नराम्रोसँग बडी शेमिङ्ग झेल्नु परेको थियो । त्यसबेला म फिल्म उद्योगमा नयाँ थिएँ । धेरैजनासँग चिनजान थिएन । सायद यही कारण हुन सक्छ यहाँका मानिसहरु म के सोच्दछु, के महसुस गर्छु वा मेरो के विचार छ भन्ने कुरा जान्न चाहन्नथे । अहिले म यहाँ आएको केही समय भइसक्यो । त्यसैले केही व्यक्तिहरु मलाई चिन्न थालेका छन् । साथै मेरो भावना र विचारको सम्मान गर्न थालेका छन् । तर कसैले पनि बडी शेमिङ्ग गर्नु गलत हो । कोही व्यक्ति आफ्नो शरीरदेखि खुशी छ । आफ्नो घरको खाना खान्छ, आफ्ना लागि आफै कमाउँछ भने अरुले आएर ‘तिमी कस्तो देखिन्छ्यौ वा कस्तो देखिनु पर्छ’ भन्नु अनावश्यक हो । यस संसारमा कसैको मोटोपन बाहेक अरु पनि चर्चा गर्न लायकका धेरै विषयहरु छन् ।